Akụkọ - Kasị Mma Tumbler
Mgbe anyị hapụsịrị eriri iri na isii jupụtara na slurpee n'ihu oche nke sedan na-ekpo ọkụ, anyị kwenyesiri ike na Hydro Flask 22-ounce tumbler kachasị mma maka ọtụtụ mmadụ. Ọbụna mgbe anyị na-ata ahụhụ site na ogo 112, anyị hụrụ uru mkpuchi dị n'etiti ọtụtụ ndị na-atụgharị ihe niile ka ha wee dị ire (ha niile nwere ike ị yourụ ihe ọ yourụ yourụ gị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi ruo awa ole na ole). Arụmarụ Hydro Flask na aesthetics mere ya mmeri.
Ọkacha mmasị anyị bụ Hydro Flask's 22-ounce. N'adịghị ka karama mmiri ma ọ bụ thermos, a naghị atụfu onye a na-atụgharị n'ime akpa. Ọ na-ejigide ma okpomọkụ ma oyi naanị ruo oge ọ bụla ị ga-esi n'otu ebe gaa ebe ọzọ wee hapụ gị ka ị na-anụ mfe mgbe ị na-agagharị: ọ bụ ụgbọ mmiri kachasị mma.
Ugboro ise pụtara ìhè n'oge nnwale slurpee anyị na-ejide oyi, Hydro Flask nọkwa na ise ahụ. O weghaara anyi uzo nke abuo na njide nnwale anyi, nke site na otu ogo, ya mere o gha eme ka kọfị gi di oku maka oge njem gi. Ma aesthetics bụ ihe mere ndị mmadụ ji hụ ihe a n'anya. Anyị kparịtara mmadụ iri na abụọ (ma ọ bụ karịa) maka nri abalị gburugburu ọkụ ọkụ, ha niile kwenyere na Hydro Flask dị mfe ijide ma nwee obi ụtọ karịa ụdị 16 ndị ọzọ anyị lere anya-nke a dịkwa mkpa nye ndị na-efe ya. Hydro Flask nwere ezigbo, nwee ezigbo anya nke ndị nile anyị tụbara lee ma na-eji uwe ojii asatọ dị ụtọ. Anyị na-ahọrọ ndị ahụ na igwe anaghị agba nchara tumbler, n'ihi na ndị ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emetụ aka ma ọ bụrụ na a hapụ ha na anyanwụ.
Hydro Flask na-enye mkpuchi nke nwere ahịhịa jikọtara ọnụ maka ụdị nsụgharị 32-ounce na 22 nke tumbler. Anyị anwalela ya n'ụdị buru ibu, ọ dịkwa egwu: nwee ntụkwasị obi, dị mfe iwepụ ma hichaa ya, ma tinye ya na nkpokọlịkị na-agbanwe agbanwe iji gbochie jabbing-palate.
N’ikpeazụ, anyị zipụrụ ụlọ ọrụ anyị ka anyị jụọ ya ma ọ bụ nchekwa efere. Azịza ya: “Ọ bụ ezie na igwe efere ahụ agaghị emetụta arịa mkpuchi nke karama ahụ, okpomọkụ dị elu ya na ụfọdụ ihe na-ehicha ihe nwere ike ime ka uwe ntụ ahụ ghara ime. N'otu aka ahụ, ịnyachasị karama mmiri gị dum n'ime mmiri ọkụ nwere ike imebi uwe ntụ ahụ. ”